WAR DEG DEG: Qarax khasaare geystay oo caawa lagu weeraray Saldhiga bartamaha Gaalkacyo | HalQaran.com
Home Wararka Maanta WAR DEG DEG: Qarax khasaare geystay oo caawa lagu weeraray Saldhiga bartamaha...
Gaalkacyo (Halqaran.com) – Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in caawa laba qarax oo is xig xiga lagu weeraray saldhiga bartamaha magaalada Gaalkacyo. Waxaana qaraxyadaasi aad looga maqlay xaafadaha ku yaalla waqooyiga Gaalkacyo.
Qaraxyadan oo ahaa bambaanooyinka gacanta laga tuuro ayaa lagu weeraray Xarunta Saldhiga Bartamaha, waxaana qaraxyadaasi kadib la maqlay rasaas xoogan oo ay fureen Ciidamada Booliska ee Gaalkacyo.
Ilaa iyo hadda ma cadda khasaaraha dhabta ah ee qaraxyadaasi ka dhashay, balse waxaa soo baxaya warar sheegaya in hal askari uu ku dhaaawacmay, kaasoo loo qaaday goobaha caafimaadka.
Saraakiisha Ciidamada Booliska Puntland oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da ayaa sheegay, in qaraxyadaasi uu dhaawac fudud ka soo gaaray askari ka tirsan Ciidamada Booliska, oo xilligaa shaqada ku qornaa.
Wararka ayaa waxay sheegayan in raggii qaraxyadaasi ka dambeeyay ay ka baxsadeen goobtaasi, balse Saraakiisha Booliska ayaa waxaa laga soo xigtay inay wadaan baaritaan ku aadan raggaasi.
A-Shabaab ayaa sheegaya inta badan weerarada ka dhaca Magaalada Gaalkacyo oo dagaal kula jira Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada ka jira dalka.
qarax caawa lagu weeraray Saldhiga Gaalkacyo
War deg deg